လူတွေ ဒီလောက် တောင် ယုတ်မာနေကြ ပြီလား (မုဒုံမြို့နယ်က လမ်းမပေါ်မှာ ကြဲထားတာတဲ့) – Let Pan Daily
လူတွေ ဒီလောက်တောင် ယုတ်မာနေကြပြီလား (မုဒုံမြို့နယ်က လမ်းမပေါ်မှာ ကြဲထားတာတဲ့) ဘယ်လို စိတ်မျိုး နဲ့များ ဒီလိုလုပ်ထားကြပါလိမ့်? လူပေါင်းများစွာကို အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်အောင် လုပ်ကြံမှုပါပဲ …တာဝန်ရှိသူများမှ မသမာသူများအား အမြန်ဆုံး စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးစေလို ပါတယ်။
ည ၉နာရီခွဲအချိန်တွင် မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို့နယ် ညောင်ကုန်းကျေးရွာ လမ်းဝတွင် မည်သူများမှ ယုတ်မာစွာ ကတ္တရာ လမ်းပေါ်တွင် ခရီးသွားကားများ အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ် စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပုလင်းဗူးအဖုံးတွင် သံများတပ်ဆင်ပြီး လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ပြန့်ကျဲထားသည်ကိုမြင်တွေ့ရသည်။
သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ မသမာ သူများအား အမြန်ဆုံး စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ပေးပြီး ထိရောက်စွာအရေးယူစေချင်ပါသည်
လူတှေ ဒီလောကျတောငျ ယုတျမာနကွေပွီလား (မုဒုံမွို့နယျက လမျးမပျေါမှာ ကွဲထားတာတဲ့) ဘယျလို စိတျမြိုး နဲ့မြား ဒီလိုလုပျထားကွပါလိမျ့? လူပေါငျးမြားစှာကို အသကျအန်တရာယျ ဖွဈအောငျ လုပျကွံမှုပါပဲ …တာဝနျရှိသူမြားမှ မသမာသူမြားအား အမွနျဆုံး စုံစမျးဖျောထုတျပေးစလေို ပါတယျ။
ည ၉နာရီခှဲအခြိနျတှငျ မှနျပွညျနယျ မုဒုံမွို့နယျ ညောငျကုနျးကြေးရှာ လမျးဝတှငျ မညျသူမြားမှ ယုတျမာစှာ ကတ်တရာ လမျးပျေါတှငျ ခရီးသှားကားမြား အန်တရာယျဖွဈပျေါ စရေနျ ရညျရှယျပွီး ပုလငျးဗူးအဖုံးတှငျ သံမြားတပျဆငျပွီး လမျးမကွီးပျေါတှငျ ပွနျ့ကြဲထားသညျကိုမွငျတှရေ့သညျ။
သကျဆိုငျရာတာဝနျရှိသူမြား မသမာ သူမြားအား အမွနျဆုံး စုံစမျးဖျေါထုတျပေးပွီး ထိရောကျစှာအရေးယူစခေငျြပါသညျ
crd : celelawka